GABLANTADA Soomaali: kan GUMAADA ayey u GURBAAN garaacdaa! – Bashiir M. Xersi
GABLANTADA Soomaali: kan GUMAADA ayey u GURBAAN garaacdaa!
Date: 7 Jul 2013Author: Bashiir M. Xersi 1 Comment
Xaaladda la soo gudboonatay Xasan Daahir Aways qofba dhan iska taag. Mid QABIIL ku ayida iyo mid aragtida gurracan “DIIN DACAREED” ee uu aaminsan yahay ku raaca.
Dhanka kale, qaarbaa uga soo horjeestay inuu GACAN KU DHIIGLE yahay “CAADIFAD BEENA” iyo qaar uga soo horjeestay inay fursad u tahay haybadda Dawladnimo “MAALIN JOOG ama INDHA KU GARAADLE!” labadan kuwa hore ayaa qiil leh, illeen iyagu dhabbihii duminta ayey hayaane, kuwanse xaal iyo xeelad midna ma oga, dumntana iyagaa u sahlaya. Maxaan saa u leeyahay? Qormada sii aqri adaa ogaan doone.
Ha u qaadan marna inaan Xasan Daahir Aways u doodayo, isagaanba QAREEN ba u baahnay, oo CADDAAN iyo MADAW u heellan haysta, balse, midda aan doonayo ayaa ah; dad badan oo iska hadaaqaya ama riyo ku jira inaan wax yar dhacdooyinka isugu xiro, ka dib, wixii ay rabaan ha ku hantaatacaan, balse, anigu kaa iyo kan midna iima kala roona, imana kala xigaan. Abwaan Salaan Maxamed Xersi “Salaan Carrabey” ayaa yiri:
Hadduu dheregsan yahay wiil yar bay, Taladu dhaaftaaye
Wax dhallaanka lagu seexiyaa, Dhaasasiyo beene
Dhalanteedka layguma sasabo, Dhacaya maantiiye
Horta Xasan Daahir Aways anaa ka qoray qoraalladan hoos ku yaalla, ee bal inta aadan xukun igula soo degdegin aqri, dabadeed go’aanka adaa iska leh:
= [Xizbul Islaan: Madaxtinimo ama Magangalin Alqaacida!] Maajo, 2010, mehaan hoose ka muuqso.
= [Caamul Jamaaca: Shalay iyo Maanta] January, 2011, halkan hoose ka sii fiirso
Haddaan intaa ka aamin sanahay Xasan iyo xertiisa, waxaan jeclaan lahaa inaan ku hakado arrin kale waxyar, oon dhextaal uga dhigayo qormada, waana dawladdii mideesay DHIIGYA CABYADA Soomaaliya, ee uu hoggaaminayey C/laayihi Yuusuf, waxaan ka qoray qormadan:
[Dawladda Empagathi: Dalladda Qabqablayaasha!] Feberaayo, 2007, lifaaqan hoose ka dhugo
Haddii uu geeriyoodayna waa tii loo sameeyey aas qaran, Mahigana ku Dukaday, maalintaana waxaan qoray middan ah:
[Imaamnimada Shariif iyo Allaahu akbarta Mahiga!] Feberaayo, 2012, liilkan hoose sii raac
Intaa ka dib, intii aan indha indhaynayey arrintan, ayaa waxaan duljoogsaday cinwaan ah: “ARGAGIXIYE XASAN DAAHIR OO XABSIGA LA DHIGAY!” si markii lo fiirsho waa cinwaan farriin muhim ah xambarsan, balse, ciwaannadii ka horreeyey hadday ka mid yihiin: “MADAXWEYNAHA GALMUDUG OO SHIR KA QAYBGALAY!” weydiinta dhalanaysa baa ah, Xasan Daahir muxuu ARGAGIXISO ku noqday, oo uusan Cabdi Qaybdiid ku noqon? Kaba muhimsane, maxay ku kala duwan yihiin?.
Dhanka kale, Murti baa tiraa: “Mayd yaa ugu danbeeyey? Kii la sii siday!” haddii maalmaha Xasan Daahir la xirayey ay dagaallo ka socdeen Kismaayo, maxaan kuwii halkaa ku dagaalayey ee shacab badan qixiyey, iyana loo dhihin waa ARAGAGIXISO? Anigu ma garan haddaad garatay fadlan is waafaji, oo naga dhaadhici.
Qodobkan iyo inta sare ku xusay ayaa ah sababta aan qormadan kooban u qorayo, illeen dadku waa wada indha ku garaadlee, hadduusan ahaynna wuusan isu jeedin. Maxaa yeelay, isma oga inuu kala hadlayo, oo marna leeyahay ARGAGIXISANIMADU waa wax XUN, marna uu leeyahay waa wax wanaagsan!
Aniga waxay ila tahay arrintan micno u samaynteedu waxay ku xiran tahay hadba diiradda aad ku eegto inta uu la egyahay, sidoo kale, waxay ku xiran tahay hadba xagasha aad ka istaagto marka aad eegayso. Ereyga ARGAGIXISO ayaa naf ahaatiisa aanan ilaa hadda lahayn QEEXID RASMI ah, oo la isku raacsan yahay, taasina waxay sababtay inuu QEEXIDYO fara badan yeesho, dadka qaarkoodna si gaar ah ugu isticmaalaan arrimo siyaasadeed awgeed. Waxay u badan tahay qolyaha xoogga wayni inay magacyo bixiyaan kuwa ay ka taag roon yihiin.
Intaa ka dib, Xasan Daahir MACANGAG loo bannaan boxo uguma horreeyo, mana ugu dambayn doono! Bishii Octoobar, 2005 ayey ahayd markii xabsiga loo taxaabay Cabdi Xasan Cawaale “Qaybdiid”, isagoo ku sugan dalka Swedan, oo lagu eedeeyey fal-dembiyeedyada dagaalka (War Crime), balse, Maxkamadda Degmada Goteborg ee dalka Swedan, ay sii daysay, iyadoo yiri caddaymo ku flan looma hayo.
Taa oo dhalisay in bannaan baxyo is qabsadaan meelo badan ay ugu horrayso Dalka Swedan, haddii intii qurbajoogta ahayd ay sidaa u dhaqmeen maxaad ka filan wiil awalba DIIN DACAREEDKA AL SHABAAB aaminsanaa, ayna u wehlin karto caadifad qabiil? hadduu uu bannaan boxo Xasan Daahir ma waxaa la leeyahay waxay dhaacaysa dawladnimoada?. Liilkan sii raac ku saabsan bannaan baxa iyo xarigga Qaybdiid.
Dhanka kale, bishii Febraayo, 2011 ayey ahayd markii Maxamed Cumar Xabeeb “Maxamed Dheere” lagu xiray Xabsi ku yaalla Magaalada Muqdisho, oo waliba ay xireen Ciidamo ka tirsan AMISOM. Wixii dhacayba waa la ogaa, oo daafaha dunida ay is qabsadeen isu soo baxyo, shirar, kulammo iyo warsaxaafadeedyo lagu dalbanayo in lagu sii daayo, si shuruud la’aan, oo ka kala dhacay Sucuudiga, K. Africa, Ingriiska IMK.
Haddaad ogtahay iyo haddii kalaba, Maxamed Dheere wuxuu si dedban iyo si toos ahba uga qaybqaatay in Xasan Daahir xagjir sii noqdo, maxaa yeelay isaga iyo xertiisii la dagaalanka Argagixisada, imisa ku magacaaban WADAAD ayey ka dhoofiyeen Garoonka Magaalada Jawhar, oo uu markaa ka ahaa Guddoomiye? Taa ayaa sii hurisay sheeko WADAADEEDKA suuqa yeelatay, ee dad badan galaafatay.
Ha illaabin inta qabqable loo mudaharaaday ciiddaan ka badan, ee labadan waxaan u soo qaatay waa kuwa dhacdo iyo sooyaal ahaan noogu dhaw, balse, Gen. Maxamed Faarax “Caydiid” Cali Mahdi Maxamed iyo inta la midka ma halmaamin.
Dhanka kale, Xasan wuxuu inta kale uga duwan yahay waa in ragga baacsanayaa ay yihiin Shisheeye caddaan iyo madaw isugu jira, halka GACAN KU DHIIGLEyaasha kale aysan sidaa ahayn! Taa oo aan dadka qaar wali fahmin, maxaa yeelay waxaan arkay Yuusuf Garaad oo qoray erayadan uusan isaguba fahamsanayn: “…Xasan Daahir wuxuu noqonayaa ninkii ugu horreeyay ee Madax ah ee lagu soo oogo dacwad ku saleysan in uu dalka dembi ka galay loona xiro.” Bal erayadan hadduu kii aqoon yahanka sheeganayey ku hadlayo, maxaad caamiga ka filan? Xasan Daahir Maxkamad laguma soo oogin, ee waa nin booqasho QALDANTAY Xamar ku jooga, illeen haddaba XABSI kuma jiree, GURI ayuu iska deggan yahay. Qormo ku saabsan mawduucan mardhaw filo.
Ugu dambayn, ma is leedahay Xasan Daahir wuxuu noqon doonaa GACAN KU DHIIGLE loo mudaharaado kii ugu dambeeyey? Mise way sii socon doontaa? Tan kale, saw ma ahan, in GABLANTADA Soomaali, hadba kan GUMAADA ayey u GURBAAN garaacdo?!
Previous Previous post: Fashalka Siyaasadda Islaamiinta!
Next Next post: Xarig-jiidka Soomaaliya la Degey Diinta ma lagu Xallin karaa?!
One thought on “GABLANTADA Soomaali: kan GUMAADA ayey u GURBAAN garaacdaa!”
Pingback: Qaybdiid iyo Moorgan; qodob ama maan mid ku qiimee! – Bashiir M. Xersi